तपोधन अनि भ्रमण [यात्रा संस्मरण] – Chitwan Post
स्रष्टा पदयात्राको सत्रौँ शृङ्खला भकुण्डेबेँशीबाट नवबुद्ध जाने कार्यक्रम रहेकोले डिल्लीरमण सुवेदी, डिल्लीराज अर्याल, हरि गौतम, श्यामबहादुर भावुक, सुरज गुरूङ र म २०७४ चैत्र ३ गते भकुण्डेबेँशी पुगेका थियौँ । रोशी वाङ्मय प्रतिष्ठानको निम्ता स्वीकार गरेर त्यहाँ पुगेका थियौँ । हो, भोलिपल्ट यानि ४ गते मैले लेखेको उपन्यास “तपोधन” नवबुद्ध नगरपालिकाका नगरप्रमुख टिपी शर्माले विमोचन गर्नुभएको थियो । पुस्तक प्रकाशित गरेपछि तामझामको साथमा विमोचन गराउने चलन चलेको छ हिजोआज । सहरदेखि टाढा रहेको भकुण्डेबेँशीमा तीन दर्जनको उपस्थितिमा “तपोधन” विमोचन गराउनुलाई कतिपयले लेखकको भूल भने । सोचाइको हेरफेर मात्र हो, पुस्तकमा सामथ्र्य छ भने र पुस्तकले ओगटेको क्षेत्र तथा पात्रका बारेमा सकारात्मक या नकारात्मक आवश्यकताअनुसारको दृष्टिकोण प्रतिपादन गरेको छ भने टिक्छ । प्रचार र सेलेब्रेटीको आधारमा पुस्तक केही समय दौडेला अन्ततः घचक्क बस्छ नै, देखिएकै छ ।
वैदिककालीन घटनालाई आधार बनाएर लेखिएको उपन्यास हो “तपोधन” । तपोधन उपन्यासमा के छ ? यस विषयमा खरो समालोचक विनोद मञ्जनले मनोहरा साहित्य समाजको चैत्र ११ गतेको कार्यक्रममा एक–एक पात्र, एक–एक घटनालाई केलाएर बोल्नुभएको थियो । तपोधनमा विश्वामित्रले तप (साधना) बाट ज्ञान आर्जन गरेर यही धर्तीमा नयाँ नियम बनाउन सक्ने कुरा खोतलिएको छ । अनेकतामा एकताको आदर्शअनुरुप यहीँको माटोको प्राचीन गाथा–भाका–चिन्तन आज पनि यो मुलुकमा फलाउन, फुलाउन उपयोगी हुने विश्वास लिएर तपोधन उपन्यास तयार पारेको हुँ र यस कार्यबाट नेपाली भाषा र साहित्यको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास ममा छ ।
म साहित्य मन पराउँछु, साहित्यलाई माया गर्छु र केही शब्द कोर्छु पनि, यही नाताले अक्षरको पूजा गरिने यज्ञ (कार्यक्रम) मा सहभागी भइरहन्छु । काठमाडौँबाहिर पनि समय–समयमा गइरहन्छु । जसको सहयोगले मलाई साहित्य पढ्ने–लेख्ने र यसमा रमाउने वातावरण बन्न सक्यो । उनी अर्थात् मेरी सहयात्री कमला गिरी मजसरी घुम्न पाएकी छैनन् । साहित्यसँग मेरोजस्तो सम्बन्ध नगाँसिएको हुँदा अक्षरको पूजा गरिने यज्ञमा उनी रमाउन सक्दिनन् ।
के सहयात्रीलाई घरमै छाडेर आफूमात्र घुम्नु उचित हो ? या साथै लगेर उनलाई रूचि नभएको कार्यक्रममा बसाल्नु पनि मलाई उचित लागेन । त्यसो भएको हुँदा हामी दुईले केही समय घुम्ने विचार बनायौँ । छोरीहरुले पनि स्वीकृति जनाएको हुँदा १२ चैत्र आइतबारको बिहान हामी दुई कलंकीबाट भैरहवा जाने माइक्रोमा सवार भयौँ । कलंकीको माइक्रो, पूरा सिट नभरिएसम्म गुड्ने त कुरै भएन । चारैतिर हेर्दै थिएँ डिल्लीराज अर्याल देखिनुभयो । उहाँलाई बोलाएँ, त्यही माइक्रोबाट नवलपुरको शाश्वतधामसम्म साथ दिनुभयो । यस यात्रालाई हामीले नितान्त गैरसाहित्यिक भ्रमण बनाउने सल्लाह गरेका थियौँ । साहित्यिक बनाउँदा कार्यक्रममा बढी समय दिनुपर्ने हुँदा चाहेकोजति घुम्न पाइँदैनथ्यो । सम्पूर्ण कुरो चाहेको जस्तो पनि हुँदैन । कलंकीबाट छुटेको माइक्रो एकैपटक रामनगरमा गएर रोकियो । बिहान १० बजेदेखि मुग्लिनको बाटो रोकिने हुँदा घुइँक्याएर लगेको थियो ।
आजको हाम्रो गन्तव्य थियो रुपन्देही मङ्गलापुरको समर्थन निवास । रमेश समर्थनसँग चिनजान साहित्यले गराएको हो । रौतहटको बागमती नदीकिनारको मत्सरी संस्कृत माविका शिक्षक, स्थानीय समाजमा मिलेर बस्न सकेका, अध्यापन पेसा इमानदारितासाथ निभाएका । अहिले म यसै भन्न सक्दिनँ, समर्थनलाई सहयोग गरेँ या पाएँ जे भए पनि हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध छ । हाम्रो परिवार गौरमा रहँदा होस् या अहिले उपत्यकामा थन्किँदा, आजसम्म बाटो तर्किएर हिँडेका छैनन् । दुःखम् सुखम् जेजसरी हुन्छ आउँदा गुजारा चलाएकै छौँ । हामी घुम्न निस्किएकाको बाटो त्यही प¥यो, समर्थनकहाँ नजानुको अर्थ हो गतिछाडा हुनु या आत्मीयताप्रति नकारात्मक बन्नु । सहयात्री कमलासँग मञ्जु ढकालको यस केही घन्टाको यात्रामा बिसौँपटक मोबाइलमा कुराकानी भएको थियो । मञ्जु ढकाल मंगलापुर चोकमा मूर्तिजस्तै उभिएर हाम्रो प्रतीक्षा गर्दै गरेको देखियो । चैत्र महिनाको २ः४५ बजेको घाममा सेकिएर उभिनुले पनि हामीबीचको सम्बन्ध कस्तो छ लख काट्न सकिन्छ । हामी सुरक्षितसाथ मंगलापुरको समर्थन निवासमा पुग्यौँ । “कमला दिदी ! तपाईंलाई बाटोमा कुनै अप्ठ्यारो त भएन ?” मञ्जुले भनेकी थिइन् । हामी समर्थन निवासलाई आफ्नै घर ठानेर बस्यौँ । चराहरु दिनभरि चारो चरेर राति आराम गर्न आफ्नो गुँडमा फर्कन्छन्, हामीले आश्रय लिएका घरका दुई सदस्य (समर्थन र कान्छो छोरा) दिनभरि काम गरेर साँझ घर आइपुगेका थिए । समर्थनलाई भनेको थिएँ– हामी यता घुम्न आएको कुरा कसैलाई नभन्नू, साहित्यिक कार्यक्रममा अल्झन चाहन्नँ । समर्थनलाई पनि समस्या नै थियो । समस्याबाट छुटकारा पाउन सुटुक्क फेसबुकमा राखी पो हालेछन् ।
भोलिपल्ट समर्थनलाई लिएर आत्मीय आदरणीय बुँद दाजुलाई भेट्न भैरहवा गएँ । एउटा पुस्तक ‘तपोधन’ दाजुलाई अर्पण गर्न पाउँदा मेरो मन औधी रमायो । म आइपुगेको जानकारी बुँद दाजुले तत्काल केही साहित्यकारलाई गराउनुभयो र १४ गते साँझ ४ बजे पुस्तकालयमा भेटघाट कार्यक्रम तय गरी पो हाल्नुभयो । ममा सामथ्र्य छँदै छैन, आदरणीय दाजुको कुरा काट्न सक्ने । चैत्र महिना बाहिर भतभती पोल्ने घाम, बुँद दाजुको घरमा दिनभरि सुन्ने÷सुनाउने । गीत, गजल, बाजा, कवितासहित हामी सहभागी चार जनाको समय–समयमा खानपान, बुँद दाजुको गायन र वाद्यवादनको भिडियो भाउजू सोनु गुरूङले बनाएर फेसबुकमा राख्नुभयो । आज कयौँ महिनापछि १२ चैत्रको रमाइलो सम्झँदै आफैँ मख्ख पर्दैछु । यस्ता केही विशेष क्षणहरु हुन्छन् जसको झझल्को बारम्बार आइरहन्छ । हामी नेपालीहरुको यो संस्कार नै हो, आत्मीयजनबीच रहेर रमाउनु । हामी कति भाग्यमानी छौँ, विगतको इतिहास हेरेर वर्तमानमा रमाउने । बुँद राना, समर्थन, सोनु गुरूङको जीवन्त आत्मीयता चाहेर पनि बिर्सन सक्दिनँ । हो बेलुकीपख, सिद्धहस्त हाइजिङ डीबी पुनको घरमा गएका थियौँ, राम्रो हाइकु लेखेर पनि प्रचारप्रसारदेखि टाढा रहन रूचाउने, साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित हुन खासै रूचि नदेखाउनु पुनको एउटा ठूलो भूल र उनकै क्षमतामाथि अक्षम्य अपराध लाग्यो मलाई ।
चौध गते बिहान हामी दुई शंकरनगरको वन वाटिका हेर्न भनेर मणिग्राम प्रस्थान ग¥यौँ । वन वाटिकाछेउमा अहिले विष्णु कुँवर घर बनाएर बसेका छन् । काठमाडौँ भीमसेनगोलामा हामी केही समय सँगै बसेका थियौँ । यता आएको समयमा बाटो काट्नै नसकिने सम्बन्ध छ हामीबीच । हो, विष्णु कुँवरको घरमा सो दिन बिहानको भोजन गरियो । पारिवारिक सम्बन्धले गर्दा हामी अंकल–अन्टी बनेका छौँ । सम्बन्ध संवद्र्धन र संरक्षणको यस्तो अपनत्वपूर्ण कला नै नेपालीत्व हो । भोजनपश्चात् विष्णुकी आमा र दिदीसँग बिदावारी भइयो । त्यहाँको वन वाटिका विष्णुको साथमा राम्ररी घुमियो, मिनी चिडियाखाना अवलोकन गरियो । यतिले पनि आन्तरिक पर्यटक तान्न सफल रहेको र गतिलो पिकनिक स्पटको रुपमा विकास भएको पाउँदा खुसी लाग्यो ।
अनि हामी मणिमुकुन्द सेनको फूलवारी हेर्न बुटवल गयौँ । मणिमुकुन्द सेनको शरदकालीन दरबार रहेको ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गरियो । व्यापारिक नगरी बुटवलले यसलाई सिँगार्न र प्रचारप्रसार गर्न ध्यान दिएको रहेनछ भनेर भन्न मिल्दैन । यस्तै हो, यो फूलबारी शिवालिगमा रहेको हुँदा पहाड चढ्नुको पनि आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ । वन वाटिका र फूलबारी घुमेर हामी यानि पत्नी कमला, भतिज विष्णु र म बुटवलको बसपार्कमा दिउँसो २ः३५ तिर पुगेका थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई । त्यहाँ विष्णुलाई बिदा दियौँ अनी समर्थन र मञ्जुको साथमा भैरहवा जाने बस चढ्यौँ । मंगलापुरमा कमला र मञ्जु ओर्लिए, म र समर्थन भने भैरहवा लाग्यौँ । बुँद दाजुको साथ लागी सहिद स्मृति पुस्तकालय पुग्यौँ । साहित्यकारसँगको भलाकुसारीको अनुभूतिलाई कार्यक्रमको एउटा नौलो स्वरुप लाग्यो मलाई । साहित्यको नाममा खर्चिएको समयको सामथ्र्य थियो त्यो कार्यक्रम, यसो भन्नु अवश्य अनुचित हुने छैन ।
सोह्र गते बिहान समर्थनले खोजेको जिपमा बसेर समर्थन, मञ्जु, सुमित, कमला, रीता र म सात जना धार्मिक तीर्थस्थल सुपादेउरालीतर्फ लाग्यौँ । त्यस क्षेत्रमा सुपादेउराली देवीको नाम व्यापक छ । यसको व्यापकताको निश्चित परिधि छैन । बुटवलबाट पश्चिमतर्फ एकनासले तीव्र गतिमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गाडी दौडिरहेको छ, गोरूसिङ्गेबाट उत्तरतर्फको बाटो समातेपछि गतिमा निकै कमी आएको छ । आउनु पनि स्वाभाविकै हो, सानो बाटो र घुम्तीहरुका कारण । हाम्रो यात्राको केन्द्रविन्दु सुपादेउराली भएको हुँदा बाटामा देखिएका र भेटिएका प्राकृतिक तथा पौराणिक स्थलहरुलाई हात जोडेर नमस्कार गरेँ, मनमनै समय मिलेमा आउने गरी । सुपादेउराली देवीजत्तिकै सम्मान गरिनुपर्ने स्थानहरु बाटामा भएझैँ लाग्यो मलाई । आस्थामा सबै कुरो समावेश हुन्छ । आस्थाले धेरै कुरो बचाएको हुन्छ । सुपादेउराली देवी ! सुपाखोलाको पश्चिम डिल–भीरमा सत्यको मूल्यमा सम्मान पाएकी । जानेर वा नजानेर गरिएको पापबाट मुक्त हुन आउने गर्दा रहेछन् भक्त । भक्तको मूल्य भनेकै असहजसाथ देवीलाई सम्झँदै आउनु न हो । भक्त आएनन् भने कुनै पनि देवीको मूल्य नै हुँदैन । हो, यहाँ पर्याप्त भक्त आउने गर्दा रहेछन् । मन्दिर पनि चिटिक्कको छ र मोटर बाटोले गर्दा पनि पहिलेको भन्दा भीड बढेको हुनुपर्छ ।
एउटै परिवारका एउटै अन्न खाएर हुर्केका एउटै परिवेश भए पनि देवदत्तको सम्झना आउँदा मन थक्क थक्क गर्छ भने गौतम बुद्धको सम्झना आउँदा श्रद्धाले शिर निहुरिन्छ किन ? त्यही भएर त उनको जन्मस्थल लुम्बिनी करोडौँ बौद्ध धर्मावलम्बी र बुद्धप्रति आस्था राख्नेहरुको पवित्र धाम बन्न गएको छ । लुम्बिनी पवित्रधाममा समर्थन, मञ्जु, कमला र म अठार गते पुग्यौँ र त्यहाँ उपलब्ध रिक्सा चढी समयले साथ दिएकोजति स्थान घुम्यौँ पनि । यसो त, नेपाल लोकवार्ता परिषद्को सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउँदा असोज महिनामा यहीँको कोरियन धर्मशालामा तीन रात बास बसी यहाँका कतिपय कुराहरु बुझी हेरिसकेको थिएँ ।
यहाँसम्म आइसकेपछि पहिलेदेखिकै नाम चलेको पाल्पा नजाने कुरै भएन । कृष्णभीरपछिको शिद्धबाबाको भीर नहेरेर भो ? अनि समर्थनको साथमा उन्नाइस गते एकाबिहानै पाल्पा लागियो । एउटा बसले मंगलापुरबाट बुटवल, दोस्रोले तानसेन बजार र तेस्रोले भैरवथानसम्म पु¥यायो । पाल्पाको प्रवासजस्ता रमणीय फाँट हेर्दा मनै हराभरा भयो । यहाँ भैरवलाई रोट चढाइँदो रहेछ । भनिन्छ, मणिमुकुन्द सेनले काठमाडौँबाट लुटेर ल्याएको भैरव यहाँ राखिएको हो । यहाँ एउटा अचम्मको कुरो भनेको एउटै मन्दिरमा दुई भैरव छन्, बटुक भैरव र काल भैरव । काठमाडौँबाट कतिवटा भैरव लुटेर ल्याए ? एउटा हो भने कुन हो ? म यतातिर घोत्लिनँ थाले ।
भैरवडाँडाबाट चारैतिर हेर्न थालेँ । स्थानीयसँग बात मार्दै जाँदा वारपर पुराना खर्क रहेको पाएँ । अनि मलाई विश्वास भयो, यहाँको खर्कको रक्षक (भैषज), पशुपालक गोठालेले पुज्दै आएको बटुक भैरव नै हुन् र मणिमुकुन्द सेनले लुटेर ल्याएको काल भैरवलाई गर्भगृहमा लुकाएर राखिएको अनुमान लगाउन पुगेँ म । यहाँको रोट जो लामो समयसम्म बिग्रँदैन, अडिलो र तागतिलो छ । यसले मेरो मनमा एउटा कुरा खेल्न थाल्यो, नेपाल एकीकरणसँग रोटको सम्बन्ध छ (यसबारे छुट्टै लेख्नेछु) । घुम्ने क्रममा पाल्पा बजार, टुँडिखेल, पाल्पा दरबार, उजिर सिंहले स्थापना गरेको भगवती मन्दिर घुमे पनि पाल्पाको गौरव धवल पुस्तकालय हेर्न नपाएकोमा खल्लो अवश्य लागेको छ ।
रमेश समर्थन र मञ्जु ढकालले केही दिन बस्नका लागि गरेको आग्रह हामी घुम्न निस्केका जोइपोइले पछि आउने वचनसहित टार्न बाध्य भयौँ र २१ गते बिहानको खाना खाइवरि बिदावारी भयौँ ।
यता घुम्न आएपछि देउचुलीको विशालटारमा बस्नुहुने दिदी तुलसीकहाँ जानु स्वाभाविकै हो । प्रगतिनगरमा बसबाट ओर्लियौँ । अहिले नेपालका कुनाकाप्चा जताततै सडक विस्तार भएको छ । ट्याम्पोको प्रयोग प्रचुर मात्रामा भएको छ, हुँदैछ । हो, हामी पनि ट्याम्पोमा चढेर विशालटारमा दिदीको घरमा गयौँ ।
सानो छँदा मलाई दिदीले अक्षर चिनाउनुभएको थियो । जागिरे बुबालाई समय नमिल्ने, अनपढ आमा अनि भर्खर पढ्न थाल्नुभएको दिदी मलाई अक्षर चिनाउन, सिकाउन प्रयास गर्नुहुन्थ्यो । दिदीको यो गुण मैले तिर्न नसके पनि बिर्सन भने हुन्न । अझ सो समयमा चलेका लोककथा जो दिदीले सुनेर पढेर सिक्नुभएको थियो, सुनाउनुहुन्थ्यो । म सानो हुँदा ‘लाल–हीराको कथा’, ‘तोता–मैनाको कथा’, ‘मधुमालती’, ‘सतलसिंह राजाको कथा’ जस्ता पुस्तकहरुको खराब या असल प्रभाव पाठकमा जेजस्तो परेको होस् खुब प्रचलित थिए, मानिसहरु पढ्थे र सुनाउँथे । यस्ता कथाहरु सबभन्दा पहिले दिदीबाट थाहा पाएको हुँ ।
दिदीकै नजिकमा चौधरी ग्रुपले दक्षिण भारतीय शैलीमा वैष्णव (कृष्ण चरित्र) मन्दिर शाश्वतधाम बनाएको सुने पनि घरव्यवहारको कारण पुग्न पाउनुभएको रहेनछ । साँझपख ट्याम्पोमा चढेर दिदीको साथमा हामी दुई पनि शाश्वतधाम हेर्न गयौँ । साँझको समयमा गएको हुँदा मन्दिरको गर्भगृहमा गरिने आरती पनि अवलोकन गर्न पायौँ । यो धाम रमणीय छ, दर्शनीय छ । समय मिलाएर एकपटक अवलोकन गर्दा कोही पनि पछुताउन पर्दैैन ।
विशालटारमा २२ गते बिहान खाना खाइवरि चितवनको बछौलीमा धनराज र सीताको आश्रममा गयौँ । भलाकुसारी र आपसमा गफगाफ हुन्छ । साँझपख धनराज भाइको साथमा थारु संग्रहालय अवलोकन गर्न गयौँ । सौराहा, राप्ती नदीमा जलक्रीडामा रमाउँदै गरेको गैँडा हेरियो । पर्यटन नगरीले विभिन्न देशका पर्यटक भिœयाउन सकेकोमा खुसी लाग्यो । यात्राको थकान मार्न २३ गते ससुराली रौतहटको सन्तपुर (म.) गइयो र आनन्दसँग बसियो ।
यात्राको थकाइ उत्रिएपछि २६ गते बिहान चन्द्रनिगाहपुरबाट बस चढेर सिरहा, बन्दीपुरमा यशोदा पौडेलकहाँ पुग्यौँ । यशोदा पौडेल साली हो र वैधव्यले एकल महिला बन्नु परेको छ । समय–समयमा आफन्तहरु आउँदा जीवनप्रतिको उत्साह बढ्दोरहेछ, उत्साह बढाउन भेटघाट गर्ने ‘हाम्रो संस्कृति’ हो । मलाई राम्ररी थाहा छ, यशोधाले समस्याहरुसँग सामना गरेको कुरा, बालबच्चा हुर्काउन लोग्नेसँग काँधमा काँध मिलाई संघर्ष गरेको कुरा । यसैले हामी पतिपत्नी भेटघाट गर्न गएका थियौँ ।
सोही दिन दिउँसो एउटा अटो भाडामा लिएर उत्तरायणी भन्ने स्थान (कमला नदी त्यस ठाउँमा उत्तर भएर बगेको छ) जो धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्दै रहेछ, तराई र शिवालिग जोड्ने झोलुंगे पुलको आफ्नै किसिमको आकर्षण रहेछ, सालीसहित हामी तीन जना घुम्न गयौँ । त्यहाँ रहेको मन्दिरका साधुले हामीलाई यसरी हेर्दै थिए कि लाग्दथ्यो त्यहाँ गएर पनि पूजा नगर्नु, केही भेटी नचढाउनु त उनको आँखामा हामी अपराधी हुनु हो, पापी हुनु हो ।
उत्तरायणी हेरेर हामी अटोबाट फर्कियौँ । अहिले पनि त्यहाँ देखिएका कुराहरुको झझल्को आइरहन्छ । संयोगले हेर्न पाएको थिएँ, म व्यक्त गर्न चाहन्नँ । आज यातायातको सुविधाले थोरै समयमा धेरै ठाउँ हेर्न भ्याउँछौँ । निश्चय नै शिवालिग काखमा सिमसारमा बाँध बाँधेर आकर्षक पर्यटकस्थल बनाउनु सामान्य सोचको कुरा होइन । मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ कि आकर्षक, पर्यटकीयस्थलका साथै तालमा बोटिङको व्यवस्था पनि छ भनेर । हो, म बाबा तालकै कुरा गर्दैछु । मेरो भावनामा बाबा ताल बसेको छ । आकर्षक, मनमोहक, प्राकृतिक हरियाली, पहाड चढेर अझ हाइकिङको आनन्द लिन मिल्ने बाबा तालबारे खर्चिएको यो शब्द प्रशंसा होइन । यो त्यहाँ रहेको पूर्वाधार र योजनाबद्ध विस्तारका सामु केही होइन । पहाडको दक्षिणतर्फ बाँध बाँधेर बनाइएको, परिश्रमले बनेको बाबा ताल । तालमात्र होइन त्यहाँ धेरै कुराले सजाइएको छ । पारिवारिक घुमफिर र पिकनिक स्पटका रुपमा विस्तार गर्ने प्रयासमा लागेका छन् स्थानीय । स्थानीयको उत्साहपूर्वकको साथले अवश्य आकर्षक बन्छ यो स्थल, विश्वास भयो मलाई ।
अध्ययन र भ्रमणमा रमाउने, देखेर तथा भोगेर ज्ञान प्राप्ति हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । म क्षमतामा विश्वास गर्छु । बाबा तालमा रमाएर साँझपख आइपुग्यौँ, बजारको स्वरुप धारण गर्दै गरेको राजमार्गछेउको बन्दीपुर । संयोगस्वरुप सो दिन हाटबजार परेको रहेछ, यहाँको सस्तो तरकारी पनि किनियो । भोलिपल्ट यानि २७ चैत्रको बिहान बसमा चढेर यसपटकको यात्रा टुङ्ग्याएका थियौँ । हामी दुई यशोधाबाट बिदा लिएर सिन्धुलीको बाटो हुँदै यात्रा थाल्यौँ । यात्रा जीवनको ऊर्जा हो भने प्रकृतिसँग सहकार्य गरी बनाएको सिन्धुली सडक नमुना सडक हो ।
जिन्दगीमा धेरै मान्छे भेटेँ [गीत]